Nchekwa ụtụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị | ECommerce ozi ọma
Ọ bụ atụmatụ dị mma maka ndị ọchụnta ego ma ọ bụ ọkachamara ọ bụla, ọkachasị, obere na ụlọ ọrụ obere na nke nwere usoro a, nwere ike belata ibu ahụ nke mmefu nke ụlọ ọrụ ndị a site ugbu a gaba. Na nke anyị ga-atụnye ụfọdụ echiche ndị ọzọ ka ị nwee ike iji ha rụpụta ihe ịga nke ọma na oge ndị a dị mgbagwoju anya ị ga-ebi ụbọchị ndị a.
Na nke mbu, ekwesiri ighota na odighi anwansi anwansi iji belata mmefu ego, mana enwere ike itinye "uzo" ole na ole iji zere ugwo onu ogugu ugbua, na n'echiche a otu n'ime ihe ndi bara uru bu ego. ntinye ego, nke na-enye ohere ịnyefe n'etiti ha na-etinyeghị ụtụ isi ọ bụla, iji ree ha mgbe e mesịrị mgbe ezumike ụtụ isi malitere maka ụtụ isi ha.
Na njedebe nke ụbọchị, ihe ọ bụ bụ na ịnwere ike ịnwe ego niile ị na-akwụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị. Yabụ na n'oge izizi ị nwere chee mkpa gị ndị kachasị mkpa iji kwalite azụmahịa a pụrụ iche. Ihe nke na-agaghị adị mfe ma ọlị, mana gị na obere ịnọgidesi ike na ịdọ aka ná ntị ị ga-emecha mezuo ebumnuche gị.
1 Nchekwa ego na itinye ego
2 Na ego itinye ego
3 Atụmatụ iji melite ụtụ isi
4 Ationtụ ụtụ na nchekwa
5 Akaụntụ nnukwu ego
Nchekwa ego na itinye ego
Otu n'ime mkpesa ndị obere na ndị na-ajụ nchekwa gbasara ngwaahịa itinye ego ha na-akwụ ụgwọ bụ oke ego ha kwesịrị ịrara iji kwado usoro ụtụ isi ha, nke etinyere ugbu a na 21%, nke ahụ pụtara na maka euro 100 ọ bụla akwụpụtara na ụfọdụ nke ngwaahịa ha, Treasury na-ewe euro 21. Enweghị usoro anwansi iji mee ka mmefu ndị a belata, nke ahụ zuru oke, mana ọ bụrụ na ịnwere ike itinye "aghụghọ" ole na ole iji zere ịkwụ ụgwọ ọnụego ụtụ isi ugbu a.
Site n'echiche nke otu ngwaahịa ngwaahịa kachasị baa uru maka ndị ji ya, dị ka ego itinye ego, ọ ga-ekwe omume, na nke ọ bụla dị iche iche (ego a na-agbanwe agbanwe, agbanwe agbanwe, agwakọta, ego ...), ebe ọ bụ na ha na-enye ohere ịnyefe n'etiti ghara itinye ihe ọ bụla gbasara ego obodo (0%), ọ bụrụhaala na ha edebe isi obodo ha na ego ọzọ site na ọrụ nnyefe. Ma kpachara anya na ịmebanye ụdị ụdị ahịa ọ bụla na ha (ma ọ bụ nke ọma ma ọ bụ ngụkọta) n'ihi na n'ọnọdụ a, a ga-etinye ha n'ọrụ n'oge ịmechara ọrụ ahụ.
Na ego itinye ego
Site na nke a, ọ ka mma ịnọ na ego itinye ego karịa imechi ọnọdụ ha (ree ha) yana a ga - asị na ọ bụ akaụntụ nchekwa, na - eche ka nguzo gị bawanye ka ụbọchị na - aga. Kama nke ahụ, atụmatụ a bara uru maka ndị debanyere aha anaghị emetụta ndị ọzọ ego na ngwaahịa itinye ego (nkwụnye ego, akwụkwọ ndekọ ego ụlọ akụ, ahịa ahịa, akwụkwọ ikike) Nke ahụ anaghị ekwe ka mgbanwe mgbanwe gaa na ụdị ọzọ nke otu ngwaahịa ahụ na-etinyeghị ụtụ isi a na ha. Ma obu ire ere ego nke ego ha ju ha ka erere ha ma obu, mgbe ha tozuru oke bu mgbe eweputara otu oru ahu, ya na enwegh ike inweta uzo akwukwo.
Ego ndị a na-enye ndị ahịa ohere iji ohere uto nke ahịa ngwaahịa na-eweta n'oge a, na-etinyeghị ihe egwu ha, na-enwe ike n'ọtụtụ oge inweta nyocha site n'ọtụtụ nhọrọ nke ngwaahịa dabere na ahịa ọ bụla, ma nke mba ma nke mba ma , nke ndị na-apụta na-apụta ìhè maka ihe ọhụụ ha.
Uzo ndi ozo ichoputa ego nke njirimara ndia di oke obosara, site na ndi dabere na ahia di iche na ndi na etinye ulo oru ha na ahia ahia nke uwa obula dika North America, European ma obu Japanese, n’agha n’agha ndi nke obodo. agwa. Enwere ike ịdebanye aha ha na euro 100, mana ihe kachasị mkpa ị ga-eburu n'uche bụ na -adịghị ka itinye ego ozugbo n'ahịa ahịa- ha nwere usoro opekata mpe nke ga-adịgide adịgide nke enwere ike iwepụta ruo afọ 5 ma ọ bụ 7, maka ya a na - eme na klaasị iji tinye ego na etiti ogologo oge.
Atụmatụ iji melite ụtụ isi
O doro anya na ụtụ isi maka ngwaahịa ego bụ ihe dị n'oge a na-enweghị ike ịgbanwe ruo mgbe mgbanwe ọhụrụ na ụkpụrụ, mana site na obere "aghụghọ" anyị nwere ike ịgbanwe omume a, n'agbanyeghị na ọ bụ naanị na ngwaahịa a kapịrị ọnụ na ọ bụghị na niile ha, dị ka ị pụrụ ịhụ.
Na ego itinye ego ị nwere ike idobe mbak ma ọ bụ nyefee ego ndị ọzọ (ọbụlagodi site na ndị njikwa dị iche iche) iji chere ka agbada ụtụ isi nke ngwaahịa ndị a. Kpọmkwem ugbu a, ọtụtụ olu ndị ama ama ama ama ama na-apụta na nke a dobe ụtụ, nke nwere ike iru ruru 18%, dị ka e guzobere na mbụ. Ọ dị mma, ọ bụrụ na etinye ego etinye ego itinye ego na ntinye ego ruo oge ahụ, ndị ọrụ nwere ike ịchekwa 3% na ụtụ.
N'ihe gbasara ngwaahịa ndị ọzọ, ma na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe, ọ ga-esiri ya ike iweta atụmatụ a na-arụpụta, ma ọ bụrụ na ọ baghị uru. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-agụnye ịdenye ego na ọkara ma ọ bụ ogologo oge, n’agbata afọ 2 na 5, na-eche ka ụtụ ụtụ ahụ ị na-atụ anya ogologo oge na-abịa. Otu ihe a mere na ndetu ego nke ụlọ akụ ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya (na-emekọrịta ha ruo ọtụtụ afọ), ebe a na-ahazi ebumnobi a, ọ ga-ekwe omume site na ịkebe itinye ego anyị na ogologo oge, ma ọ bụ kpomkwem mgbe ezumike gbasara ego na-eme.
Ationtụ ụtụ na nchekwa
Nweta nloghachi site na nkwekọrịta na nke ahụ ga-aba uru site na ụtụ isi maka ndị ọrụ karịa ụdị itinye ego ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na, ọ bụ ezie na ha na-akwụ ụtụ isi na 21%, a na-akwụ ụgwọ maka ụtụ isi ruo euro 1.500 kwa afọ maka ụgwọ niile ma ọ bụ kerịta na uru a nwetara na afọ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a ga - eme: ọ bụrụ na ejirila mbak na - enweta ụgwọ ọrụ na pọtụfoliyo ahụ ihe karịrị ọnwa abụọ tupu nchịkọta ma ọ bụ ọ bụrụ na ejide ha ihe karịrị ọnwa abụọ mgbe a chịkọtara. A ka ọ ga-kwuru na ugbu a Spanish equities n'ịwa a dividend mkpụrụ nke n'etiti 5% na 8%, ọbụna karịa site na ụlọ ọrụ kachasị mmesapụ aka na ndepụta ngwaahịa.
Gba ụgwọ ezumike nka na-ebute uru ụtụ isi dị mkpa. N'ezie, onyinye maka ngwaahịa ndị a na-enye ikike ịbelata isi ụtụ nke Cometụ Ego Abụọ, na-ekwe ka ndị nwere ya ịkwụsị ịtụ ụtụ isi ma nweta ego nchekwa. Onyinye niile nke onye so na ya na-eme n'ime afọ a ga-ebelata site na isi ụtụ isi ego, yana oke nke iwu guzobere.
Akaụntụ nnukwu ego
Banlọ akụ na ụlọ akụ na-echekwa ego na-ebupụta ụdị akaụntụ ndị ọzọ nke na-enye ndị ahịa ha ụgwọ dị elu, n'agbanyeghị na mgbada na ọmụrụ nwa, ndị a bụ obere okwu gafere 2% na, nke otutu usoro iji zuta ha ka ha dinara na inye ha uru ha dabere na uzo, iji kwuo ugwo buru ibu.
Ihe ngosi nke ụdị ngwaahịa a bụ na ha anaghị etinyekarị ụgwọ nlekọta ma ọ bụ ụgwọ nlekọta na ndị ọrụ ndị ọzọ na-akwụghị ụgwọ maka ndị na-ejide ha dịka ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ịnweta kaadị kpamkpam n'efu.
N'ihi ọdịda na nso nso a na-aga n'ihu na ọnụego ọmụrụ nwa, ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ ahọrọla ichefu banyere ọnụego edozi ma nye ụdị akụkọ a na-ezo aka na Euribor, ebe n'ọnọdụ ndị ọzọ, ha ewepụla ha ozugbo na ego ha nyere.
Ọnọdụ ọnụego na ọnwa ndị na-adịbeghị anya emeela ka ọ ghara ịdị mma nke ụdị ngwaahịa a, nke n'oge ndị ọzọ wee nye ndị na-ejide ha nkwụghachi ọbụlagodi karịa 4%, na 6% na ụfọdụ nkwalite ndị a kacha mara amara, ebe oge ọ dị obere na ha gafere 2%. Maka nke a, ụlọ ọrụ ndị na-ere ha ahịa na-achọ ha mma site na usoro ọrụ nwere ike ịbụ ekwu maka ego ọrụ. Nweta kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ inwe ike ịkwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ bụ ụfọdụ n'ime azịza ndị a.
N'ọnọdụ ọ bụla, akụkọ ndị a na-enye mmasị dị elu karịa akụkọ nyocha ọdịnala, nke kachasị mma anaghị agafe 1%. Omume ala na ọnụego ọmụrụ nwa na-emetụtakwa ịnye ngwaahịa ndị a. Somefọdụ ụlọ ọrụ akwụsịla ozugbo ịnwe ha na akụ ha na-enye ego, ebe ndị ọzọ na-echefu banyere ọnụego ego ma họrọ ịkọwa ha na Euribor, ederede nke edepụtara ihe karịrị 90% nke ego mgbazinye ego. A ka ọ ga-kwuru na ugbu a Spanish equities n'ịwa a dividend mkpụrụ nke n'etiti 5% na 8%, ọbụna karịa site na ụlọ ọrụ kachasị mmesapụ aka na ndepụta ngwaahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Nchekwa ụtụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị